जुम्लामा डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन डायरी
चिकित्सा शिक्षाको सुधारको माग राख्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बस्नका लागि ०७५ असार १५ गते बेलुका जुम्ला पुगे ।
डा केसी अनशन बस्न जुम्ला पुगेको जानकारी पाएपछि प्रशासनले असार १५ गते बेलुका नै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय देखि दुई सय मिटर वरपर अनशन, धर्ना जुलुस कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाईने भन्दै निशेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो
असार १६ गते डाक्टर गोविन्द केसी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विहान १० बजे जादै गर्दा नेपाली सेनाको टुडिखेल मैदानमा माथिल्लो गेटमा प्रहरीले रोक्यो । प्रहरीले प्रतिष्ठान जान रोकेपछि पुन केसी फर्किएर प्रशासन अगाडी समर्थक सहित धर्ना दिए । निशेधित क्षेत्रमा धर्ना दिएपछि प्रहरीले गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुर्यो । डाक्टर केसीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र अनशनको घोषणा गरेपछि सोही दिन अपरान्त ४ बजे तिर पुर प्रहरीले जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कभर्डहलमा लगेर छोड्यो ।
असार १६ गते देखि अनशन शुरु गरेका डाक्टर केरीले अव्यवस्थित रुपमा चार दिनसम्म कभर्ड हलमा विताए ।
डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि अनशनको पाँचौँ दिन अर्थात असार २१ गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगियो । डाक्टर केसीका समर्थक र चिकित्सकहरुले कभर्डहलमा स्वास्थ्यका दृष्टिकोण उचित स्थान नभएकाले प्रशासन लचिलो बनेपछि प्रतिष्ठान लिन सफल भएका हुन् ।
डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुदै गएपछि र उपचारका लागि जुम्लामा आईसियू जस्ता उपकरण नभएपछि चिकित्सा संघले जुम्लामा डाक्टर केसीलाई उपचार गर्न नसकिने भन्दै आएको थियो ।
डाक्टर केसीको सर्मथनमा नेपाली काँग्रेस, विवेकशिल शाझा पार्टी, नयाँ शक्ति र नागरिक समाज तथा महिला अगुवाहरुले प्रतिप्रतिदिन डा केसीका माग सम्बोधनका राज्यलाई दवाव दिए आएका थिए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ट, रंगमति शाही, प्रकाश रसाईली त्यसैगरी गरी विवेशिल शाझा पाटीका कर्णाली प्रदेश संयोजक गहेन्द्रप्रसाद दाहाल र मानवअधिकार संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष इन्द्र अर्याल लगायत व्यक्तिहरुले जुम्लामै आएर डाक्टरलाई भेटेर सर्मथन जनाएर माग संम्बोधनका लागि राज्यलाई दवाव दिदै आएका थिए ।
अनशनको २० औँ दिन अर्थात साउन ३ गते बिहान ९ बजे ः अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले काठमाडौं लैजाने हल्ला चलेपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा केसी समर्थकको विरोध प्रदर्शनको तयारी, केसीलाई लैजान सेनाको हेलिकोप्टर भगवती दल गणमा अवतरण ।
बिहान १० बजे कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी, सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बरालसहित प्रतिष्ठान हातामा प्रवेश गरे । विद्यार्थीले अवरोध गरेपछि डा. केसीलाई नभेटेरै उनीहरू फर्किए ।
बिहान १०ः३० बजे प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजेन्द्रराज वाग्ले र सरकारी टोलीबीच आधा घन्टा छलफल भयो । केसीलाई काठमाडौं लैजाने सहमति बनेन । सरकारी टोली बल प्रयोग गरेरै भए पनि लैजाने निष्कर्षमा पुग्यो ।
बिहान ११ः३० बजे प्रहरी बल प्रयोग गरेर अस्पतालभित्र र्छियो । विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थी र स्वास्थ्यकर्मीसँग झन्डै एक घन्टा झडप भयो । प्रहरी जवान कमल उपाध्याय गम्भीर घाइते भए । झडपका क्रममा प्रतिष्ठानका झ्यालढोकाका सिसा र फर्निचर तोडफोड भए ।
दिउँसो १ः३० बजे डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन बोलाए  । जुम्लामा बसिरहँदा धनजनको ठूलो क्षति हुने देखिएकाले आफू काठमाडौं जान तयार भएको उनले बताए । तनावग्रस्त वातावरण त्यसपछि सामान्य बन्दै गयो ।
दिउँसो ३ः०० बजे जुम्लाका डिएसपी तपनकुमार दाहालले भिडलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यसहित ‘घाइते प्रहरी कमल उपाध्यायको निधन भयो’ भन्दै माइकिङ गरे । त्यसपछि प्रदर्शनकारी तितर–बितर भए ।
अपराह्न ४ः०० बजे प्रतिष्ठान परिसरमा केसीका केही समर्थक विरोधमै थिए । तर, पनि सरकारी टोली केसीलाई सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं लैजान सफल भयो । जाँदाजाँदै केसीले आपूmलाई बल प्रयोग गरेर सरकारले काठमाडौं जान बाध्य पारेको बताए ।